İZBAN | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ESHOT’un5Ağustos’ta gerçekleştirdiği akıllı ücret toplama sistemi işletimi ihalesine yapılan itirazlar reddedildi. İhaleyi kazanan E-Kent firması,7Aralık’ta iş başı yapacak Sabah’tan Ertan Gürcaner’in haberine göre; “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin [ပို ... ]
6-15 88 စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ အပိုဆောင်းအချိန်စီစဉ်ဖို့နှောင်းပိုင်းတွင်ညအချိန်တွင်သည်အထိ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသောİZBANကြောင့်။ İZBAN,6စက်တင်ဘာလ 2019, အ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲတလျှောက်တွင်သောကြာနေ့က၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
6-15 88 စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲအချိန်ကာလအတွင်းတိုးချဲ့ထားပြီးယင်းအပိုဆောင်းအချိန်ကြောင့်အတွင်းစိတ်-မြို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူအားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ငွေ့၏အဆင်းလှသောအချိန်ကာလအတွင်းညစဉ်ညတိုင်း Owl [ပို ... ]
ခရီးသည်တင်ဆောင်ဥရောပလူဦးရေရဲ့နီးပါးİZBAN, လှည်းစဉ် Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဓိကကျောရိုးအဖြစ်9နှစ်အဆက်မပြတ်ရှည်လျားသောလိုင်းများနှင့်ဘူတာများနှင့်အတူခရီးသည်အရေအတွက်ကိုတိုးချဲ့တီထွင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့လေဆိပ်ချိတ်ဆက်ထားပြီး [ပို ... ]
မိမိတို့အမြင်အာရုံပြင်ဆင်ထားရန်ချင်ပါတယ်ဘယ်လောက် izban တစ်ဦးသဘောသဘာဝကိုစီးဖို့အကြီးတင်းကိုကြားပြောသော Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ Izel ယောက်ျားသည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအံ့သြဖို့ခရီးသွားလာ izban'l ခရီးသည်ငွေကြေး Izel [ပို ... ]
သငျသညျအခြို့သောသတင်းရင်းမြစ်အတွက် name ကိုရွေးကောက်တော်မူကြလျှင်İZBAN, Izmir အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတူရကီရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ခရီးသည်ရထားလမ်းစနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်စီမံကိန်းနှင့် TCDD မိတ်ဖက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Aliaga 136 နှင့်အတူ Selcuk မြို့အကြား [ပို ... ]
KarşıyakaCigli ရှိ IZBAN မျဉ်း၏အထက်ပိုင်းတွင်မြေအောက်၏အနိမ့်ပိုင်းနှင့်မြို့ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားရန်ပြproblemနာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Çiğliမြူနီစီပယ်အတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံ [ပို ... ]
Aliağa’da bulunan İZBAN istasyonundaki çalışmayan asansör, engelli, yaşlı ve bebek arabalıların çilesi haline dönüştü. Aliağaekspres’ten Nimet Ergün’ün haberine göre; “Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Genel Sekreteri Musa Pala yaşadığı İZBAN’daki asansör [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုသောİzmirim Card ၏ဝန်ဆောင်မှုကာလသည်စက်တင်ဘာလတွင်ကုန်ဆုံးသည်။ ESHOT'un7လအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်နံနက်ယံ၌ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကျပ်အတည်းကိုအချက်ပြရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် Ertan Gürcaner'inသတင်းများအရ၊ "ဟုအဆိုပါ Izmir မြို့ပြမြူနီစီပယ်ရန် [ပို ... ]